Indlela UJobe A Man Can okwembula ubuntu baKhe Romantic
UJobe A Man Lingasisiza Zembula Personality Yakhe Romantic
Okay, ukuze wazi kanjani Astrology iye yasetshenziswa iminyaka eminingi ukuhlola izici zobuntu futhi zibikezela ukuhambisana esekelwe phezu umgwaqo amaplanethi?
... On izinto like uma uzalwa futhi ukuthi ungumuntu "uphawu amanzi" noma "ilanga uphawu?"
Well, Ngiye uhlelo ezinjalo ezisekelwe phezu gig guy a sika.
Kulungile: umsebenzi ayewenza kungase kubonise ukuthi noma cha nobabili kuthanda "umsebenzi" in the dating khwelana arena.
Nakuba uhlelo kungenzeka kube ngokweqile "ngokwesayensi,"Semthethweni kusekelwe phezu observation olunzulu, ezicatshangwayo, Kuhumusha, izingxoxo kanye ukuchitha isikhathi okubhaliwe insimu ezimbalwa "amagundane."
Uma ufuna ukuthatha eminye imisebenzi guess out of ngubani ngempumelelo ngixhumane, imiphumela ehlala njalo, funda futhi silalela.
ABALOBI KANYE izimbongi (Uhlobo artsy)
Laba bavame ukuba omuhle, romantic, futhi kokuhlanganyela. Babona the glass esiyisaga njengoba half full. Ubathola ngokuvamile lokuxoxa enkulu, futhi ngempela kumnandi ukuba hang out nge. Ubathola the version abesilisa umngane wakho best. Kepha xwayani: lezi "imimoya free" ngezinye izikhathi kungaba ukuzibophezela phobic futhi zinyamalale.
Uma uthandana nentombi uthisha, bathuthele inhloko ekilasini.
Nakuba zikhona ezinye eyenzeka, Amadoda abafundisa kuvamise uhlobo, Isiguli, obuhle izilwane nezingane, futhi a "Ucwaningo esheshayo." Engeza leli iqiniso ukuthi umkhulu multi-taskers nge ngenhla isilinganiso Amakghono wokucabanga.
Accountants KANYE NENOMBOLO CRUNCHERS
Amadoda kulo mkhakha ngokuvamile uhlobo ngoludala. Ungakwazi "ukubala" kulezi cuties kokuba imininingwane ngamakhasimende, ogcina, futhi imali pinchers kanye. Sinenkosi namazinga olukhuni. Uma ungumuntu singene ambitious, iqondile-anthrax, uhlobo olungokoqobo, uzothola injabulo lapha.
POLICE, Bomlilo, KANYE ABAHLENGIKAZI MALE
Yini female ayithandi ukuba 'wayesindise?"Guys kulezi zindawo zaziwa ngokuba brave, zokuzivikela, onegunya, nabakhathalelayo. Futhi akazange ngikhuluma bangabazali ngokuvamile zisesimweni esihle ngokomzimba? Abaningi abantu kakhulu ngamakhasimende, ngomuzwa udumo umthwalo.
Uzothola ukuba babe nabo "alinganayo" ebudlelwaneni.
Uzoba uchofoze nalezi abafo uma uku ezinengqondo, ukwaziswa, introverted, futhi zinhle solvers inkinga; abayikho too.
THE amahlalakhona Akaqashiwe
Asivume, sonke siyazi noma abaye yango umuntu kulo mkhakha.
"Umsebenzi" sakhe Moonlighting njengoba amazambane lombhede.
Uthi basazama "azithola ekuso." Noma kuhlale phansi inhlanhla yakhe. Noma namanje uzama ukuba aphishekele iphupho lakhe lokuba star rock at amathathu. Right? Uma kunjalo, ungase uthande ukucabangela ongakhetha yakho futhi "ukushelela pink" kuye ngokushesha.
Collar BLUE VS. UNTAMOHLUKA OMHLOPHE–Yikuphi okungcono?
Izinqumo, izinqumo. Yini intombazane ukwenza?
Ingabe kungcono ukuba kube manje blue collar indoda noma a white collar cutie?
Well, konke kuncike.
Lapha kusuke the 4-1-1.
Blue collar guys ngokuvamile phansi emhlabeni kanye okuhle ngezandla zabo. Ubathola ngokuvamile kulula mawube, kanye egos in isheke. Elithe, uqamba ngokuvamile more ukuphumula.
White collar guys izikhathi eziningi izinto ezingaba nethonya elikhulu abahola, bavame ukuba cerebral, futhi zinkulu inkinga solvers.
Nakuba lezi akuzona imithetho kanzima futhi fast, uzothola kubo osebenzayo abaningi dating izimo. Whatever you enza, khetha ngokuhlakanipha.
Phela, uthando kubalulekile "ibhizinisi."
Ngubani laphaya owake yango intombazane kunabo kubo noma guy a esifushane kuka kubo? Kwenzeka kanjani ukuba it ...